MeDRA yobatsira vagari veGokwe South nezvirongwa zvinovaramisa – Gango
MeDRA yobatsira vagari veGokwe South nezvirongwa zvinovaramisa
Methodist Development and Relief Agency (MeDRA) vakabatsiridza vagari venharaunda yeGokwe South, ward 15 nekuvadzidzisa nzira dzakanaka dzekudzivirira chirwere chedzihwa mupengo uyewo kuvadzidzisa kuita zvirongwa zvakati wandei izvo zvinounza pundutso kuvagari.
Zvimwe zvezvirongwa izvi zvinechekuita nekukurudzira utsanana kuti vagari vadzivirire denda reCovid-19 kupfurikidza nekuvaka zvimbuzi uye mighodhi yemvura. MeDRA irikushandura raramo nemagariro evanhu sezvo vagari vari kupembedza chiitiko chakanaka chirikuitwa kwavari.
Vamwe vevakataura nemupepeti weGango vakatenda zvikuru MeDRA nemabasa ayakaita. Vakati ivo MeDRA yakaunza zvirongwa zvakanaka kwazvo zvinobetsera vagary vazhinji.
“Munguva pfupi yapfuura MeDRA yakatishanyira kutipa dzidziso yakadzama maererano nezvedenda reCovid 19 takatarisana nekupedza denda iri zvachose.
“Takanga tisina chivimbo chakakwana kudzivirira denda reCovid 19 nenzira yekushamba maoko, kugara takataramuka uye nezviratidzo zveCovid-19 nenzira chaiyo. Uye kumhan’ara vanofungidzirwa kunge vabatwa neHosha yeDzihwa mupengo, asi tinotenda zvikuru nekuda kwemaFlyers nemaPosters avakatipa ayo anoratidza nekubuditsa pachena zvingaitwa kudzivira dzihwa mupengo iri,” vanodaro Amai Mtumbi.
“Pasi pechirongwa chekushambwa kwemaoko nebazi reMeDRA Zimbabwe muward medu, chakaunza mushandira pamwe munyaya dzezveutano neutsanana chine chinagwa kupa dzidziso, kuzivisa uye nekukurudzira kuitwa kweutsanana munharaunda medu.
“Chikwata chedu chinodeedzwa kunzi ‘kunzwa nekuita’ zvinoreva izvo kuti ‘hearing and doing’. Takatanga tiri makumi maviri nerimwe chete uye kusvikira parizvino tave gumi nepfumbamwe sezvo vamwe vedu vakakundikana kunge vachipfuurira mberi nesu pamusaka pehutano nekukwegura,” anodaro Anna Mukaranga.
“Sechikwata takava tinovamba munezve mikandirano uye tichikweretesana dzimari sezvo zvichisimudzira homwe dzemari mudzimba zhinji kuburikidza nekuita maprojects ekuchengetwa kwehuku dzamabroiler. Takatangisa tine huku makumi mashanu uye kusvika parizvino tave kukwanisa kuchengeta huku dzinosvika idzo zana sechikwata,” vanodaro amai Mapata.
“Kunze kwekuita zvemikando, tinova tichisangana mukudzidzisana munezve utano neutsanana takatarisana nezvinangwa zveWASH izvo zvinosanganisira kuchenjerera kuita utsanana nguva dzose uye nekurudziro kuvagari kuita utsanana mudzimba mavagere nemunharaunda. Uyewo nekushamba maoko nguva dzose nemvura ine sipo.
“Iyezvino vagari vemunharaunda vava kukwanisa kuzvigadzirira zvigubhu mumisha yavo, kuchera makomba emarara nekugonawo kushandisa zvimbuzi zvakanaka kuburikidza nedzidziso nekurudziro yatakapa kwavari” vanodaro Mai Tobaiwa.
Sabhuku Marumisa vakatenda vatungamiriri veMeDRA nekutambanudza mawoko avo vachibetsera vagari. Vakatendawo MeDRA nekurangarira vagary vemunharaunda iyi vanorarama neuroma.
“Ndinoda kutenda MeDRA zvikuru nekutambanudzira ruoko kwatiri sevagari kuburikidza nedzidziso dzekudzivirira hosha yeDzihwa mupengo, kutivakira zvimbuzi nemigodhi pachena uye nekutivambisa zvemaprojects pamwechete nemikando izvo zvavandudza raramo yevagari. Pamusoro pazvo, ndinoona zvakakodzera kuwaniswa kwemasanitizers nemamasks.
“Ndinotenda zvakare ndamiririra vakuru venzvimbo kubazi reMeDRA rinoshanda rakazvimiririra nekusimudzira nharaunda zvikuru kune avo vanorarama nehurema nevanoshaya kuburikidza nekupa chikafu zvaita kuti hupenyu hwavo hwuve panerimwe danho,” vakadaro Sabhuku Marumisa.
Umwe wevatungamiriri veMeDra anodaidzwa kuti Juniour akati iye vakawona zvakakodzera kuti vadzidzise vanhu nezvedzihwa mupengo munzvimbo yeGokwe South kuti vagari vagogona kuzvidzivirira. Akatiwo zvekare maprojects avarikuita nevagari achavabatsira kuti vawane cheuviri vagoriritira mhuri dzavo.
“Tirikuedza kurwisina nedenda reCovid-19 munzvimbo yeGokwe kuburikidza nekupa ruzivo kuvagari maererano nehosha iyi uye nenzira dzeutsanana dzakaita sekushamba maoko nguva dzose izvo zvinozoita kuti utachiona hwuderere.
“Kune zvimwe zvikwata zvakavambwa zvakare munzvimbo dzinoti Marumisa, Dzawanda neMuvangiwa nekuraudza izvo zvirikuita maprojects akasiyana siyana anosanganisira kuchengetwa kwenguruve, kuchengetwa kwehuku uye nekuchengetwa kwetsuro,” akadaro Junior.